Jurgen Klopp oo maamuus cajiib ah u sameeyay halyeeyada Liverpool ee Sir Kenny Dalglish iyo Steven Gerrard - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
Jurgen Klopp oo maamuus cajiib ah u sameeyay halyeeyada Liverpool ee Sir Kenny Dalglish iyo Steven Gerrard
June 29, 2020 at 15:34 Jurgen Klopp oo maamuus cajiib ah u sameeyay halyeeyada Liverpool ee Sir Kenny Dalglish iyo Steven Gerrard2020-06-29T15:34:29+02:00 CAYAARAHA
(Liverpool) 29 Juun 2020. Tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa si wanaagsan u maamuusay halyeeyada kooxdiisa ee Sir Kenny Dalglish iyo Steven Gerrard kaddib markii uu Liverpool ku hoggaamiyay horyaalka Ingiriiska soddon sano kaddib.
Wali waxaa magaalada Liverpool ka socda dabaal degga hanashada Premier League ee Reds, waxaana sidoo kale hambalyo joogto ah soo diraya halyeeyadii kooxdan soo maray.
Balse Macallin Klopp ayaa isaguna dhankiisa warqad furan waxa uu u diray Liverpool Echo si uu ugu mahad celiyo Dalglish iyo Gerrard oo uu ku tilmaamay inay yihiin aas-aaskii guusha ay hadda Liverpool gaartay.
Ka hor macallinka Jarmalka ah, Dalglish ayaa ahaa macallinkii ugu dambeeyay ee Reds u qaaday horyaalka Ingiriiska, iyadoo xukunkiisii labaad ee 2011 illaa 2012, uu kooxda hanatay xilli ciyaareedkan horyaalka Premier League u soo gacan galiyay kabtanka hadda horyaalka la qaaday ee Jordan Henderson.
“Waxaan jeclaan lahaa inaan si gaar ah u maamuuso labo ka mid ah xiddigaheennii hore, kuwaasoo noo sameeyay waddooyin iyo haykallo aan raacno” ayuu qoray Macallin Klopp.
“Sir Kenny Dalglish waa nafta kooxdan. Fahankiisa Liverpool waxay tahay iyo micnaha ay dadka u leedahay ayaa udub dhexaad u ah wax walba oo aan sameyno annag.
“Waxaan arkay siduu u faraxsanaa markii aan khamiistii xaqiijinnay horyaalnimada, waxaana dhoola caddeyntiisa ay iigaga dhignayd wax aan ereyo ku qeexi karin” ayuu yiri macallinka Reds.
Macallinkii hore ee Borussia Dortmund ayaa sidoo kale ammaan ugu qubeeyay kabtankii hore ee Liverpool, Steven Gerrard, waxaana uu tilmaamay in lagu xasuusan doono macallinka Rangers hadda hoggaamiya siduu ugu soo dhabar adeegay inay kooxdan koob u tartanto waqtiyo adag.
“Steven Gerrard waa lugaha kooxdan, waxaa uu dusha ku sitay sanado badan isagoo ciyaaryahan ah, mana jiro qof u qalma koobkan in ka badan inta uu isaga u qalmo” ayuu hadalkiisa ku sii daray Klopp.
“Sida Kenny oo kale, Steven waxa uu astaan u yahay kooxdan, waxaana muhiim in xilliyadan oo kale la xasuusto xiddigaheennii iyo macallimiinteennii hore ee kooxda soo gaarsiiyay halka ay maanta joogto” ku soo xiray tababaraha Liverpool.
Inkastoo Liverpool ay ka soo hartay tartammada FA Cup iyo Champions League, balse waxay dooneysaa inay rikoorro cusub u dhigto xilli ciyaareedkan horyaalka Premier League.
Reds ayaa hadda leh 86 dhibcood, waxaana u harsan toddobo ciyaar, iyagoo eegaya inay noqdaan kooxdii dhibacaha ugu badnaa ku qaaday Premier League, waxaana ay ka sare mari karaan rikoorkii Manchester City ay sameysay labo sano ka hor ee 100-ka dhibcood ay ku qaadeen.
« Xildhibaanada hishabelle ayaa ka horyimid diidmada maamulka putland ee 13 nsenoter loogu daray muqdisho.
Shan aroos oo Soomaalidu ay aad ugu kala aragti duwanaatay »
Turkiga oo goob taariikhi ah markale ka dhigay masjid